Comment ပေးရတာ အဆင်မပြေသူများအတွက် ~ နေမင်းမောင် ( နည်းပညာ )
Home » အထွေထွေ » Comment ပေးရတာ အဆင်မပြေသူများအတွက်
By နေမင်းမောင်4:00 PM94 comments
ကျွန်တော့်ဆိုဒ်မှာ ကွန်မန့်ပေးရတာ အဆင်မပြေတာနဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး ပြောနေတာတော့ ကြာပါပြီ .. ကျွန်တော်လည်း အတက်နိုင်ဆုံးတော့ အဆင်ပြေအောင်တော့ လုပ်ထားပါတယ် .. ဒါပေမယ့် Blogspot ဆိုတော့လည်း Wordpress တို့ Joomla တို့လောက်တော့ ဘယ်အဆင်ပြေပါ့ မလည်းနော် .. အခုလည်း မေးလ်ထဲမှာ အကိုတစ်ယောက်က တောင်းဆိုထားတာ ရှိလို့ Comment ပေးချင်ပေမယ့် ဘယ်လို ပေးရမှန်း မသိတဲ့ သူတွေအတွက် ကျွန်တော် Comment ပေးနည်းလေးကို ရေးပေးလိုက်ပါတယ် .. ဘာပဲပြောပြော ပို့စ်တစ်ပို့စ်ကို ရေးတယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီပို့စ်နဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး ပေးထားတဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေ ကျေးဇူးတင်စကားတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ အတွက်တော့ တကယ် အားဆေး တစ်ခွက်ပါပဲ ..
တစ်ခါတစ်လေ စိတ်ညစ်ပြီး စာမရေးချင်တဲ့ အချိန်မှာတောင် တစ်ယောက်ယောက်က ကျေးဇူးတင် စကားပြောထားတာလေးကို ဖတ်ပြီး စာရေးချင် စိတ်တွေ ချက်ချင်း ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာ တကယ်ကြုံခဲ့ ရတာပါ .. ကျွန်တော်တို့ Comment ရေးဖို့ အဆင်မပြေ ဖြစ်နေသူတွေ အတွက် အခုကျွန်တော် ရေးပေးတဲ့ အတိုင်း ကြည့်ပြီး လုပ်လိုက်မယ် ဆိုရင် ဘလော့စပေါ့မှာ ကွန့်မန့်ပေးရတာ ဘယ်လောက် လွယ်လည်း ဆိုတာ သိသွားပါလိမ့်မယ် .. ဘာပဲ ပြောပြောပါ .. အခုအချိန်ထိ ကျွန်တော့်ဆိုဒ်လေးကို လာလည်ပြီး အားပေးကြတဲ့ သူတွေအားလုံးကိုလည်း ကျွန်တော် အထူးကျေးဇူး တင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ .. ကျွန်တော့် ဆိုဒ်လေးကို နေ့စဉ် လာလည်နေကြတဲ့ သူတွေ ကြောင့်လည်း ကျွန်တော် စာမရေးချင်တဲ့ နေ့တွေ့မှာတောင် စာတွေရေးဖို့ အမြဲတမ်း ခွန်အား ဖြစ်နေတာပါ ..
ကျွန်တော် Comment ပေးချင် သူတွေအတွက် Comment ဘယ်လို ပေးရမယ် ဆိုတာကို အောက်မှာ ပုံလေးတွေနဲ့ ရှင်းပြ ပေးထားပါတယ် .. အရင်ဆုံး မိမိတို့ Comment ပေးချင်တဲ့ ပို့စ်အောက်ကို သွားလိုက်ပါ .. ပြီးရင် အောက်မှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း Profile ကိုအရင် ရွေးပေးလိုက်ပါ .. G-Mail အကောင့် ၀င်ပြီးသား သူတွေကတော့ မရွေးပေးလည်း ရပါတယ် ..
ဒီပို့စ်လေးကို PDF ဖြင့် လိုချင်တယ်ဆိုရင် အောက်မှာ ယူသွားလိုက်ပါ ..
Download Ifile.it ၊ Download Ziddu ၊ Download Mediafire
ကိုဝင်းမြင့် November 16, 2011 at 6:57 AM
ကျနော်လည်း ဒီကိစ္စကိုမေးမလို့လုပ်နေတုန်း ကိုနေမင်းမောင်ကပြောပြလိုက်တာ ဟန်ကျသွားတယ်ဗျာ ကျေးဇူးပါဗျာ။
ကိုဝင်းမြင့် November 16, 2011 at 7:03 AM
ကိုနေမင်းမောင်ရဲ့ပို့စ်တွေဖတ်ရတာ တော်တော်ကိုပညာရတယ်ဗျ ဆက်ပြီးတော့မျှဝေပေးပါအုးံဗျာ စာရေးချင်စိတ်မရှိတော့ဘူးလို့တော့မလုပ်လိုက်ပါနဲ့ဗျာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မင်းခန့် November 16, 2011 at 7:43 AM
အခုလိုလွယ်မှန်းသိရင် အရင်ပို့စ်တွေမှာကတည်းက ကွန်မန်းတွေ အများကြီး ပေးခဲ့ပါတယ်...။ အားလုံးအဆင်ပြေသွားပါပြီ...။ အကို့ဆိုဒ်လေးက တကယ်ကို သင်ယူလို့ မကုန်နိုင်တဲ့ ပညာတွေအများကြီးပါ...။ အဲဒါကြောင့်လည်း တကယ်ကို ကျေးဇူးတင်နေတာပါ...။ ဘယ်ဆိုဒ်မဆို ကောင်လေးငယ်ဆိုဒ်မှာလို ကွန်မန်းပေးရတာ လွယ်ရင် ပိုကောင်းတာပေါ့...။
nyinyitun November 16, 2011 at 7:46 AM
ကျွှန်တော်လဲမေးမလို.ပဲ comment ပေးချင်နေတာကြာပြီ အခုလိုကျွှန်တော်တို.ကိုပညာတွေအများကြီးမျှဝေပေးတဲ.အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ
ချမ်းမြေ့November 17, 2011 at 7:14 PM
ကျေးဇူးပါပဲအစ်ကိုနေမင်း ညီတို့ comment ပေးချင်ပေမယ့်မပေးတတ်လို့ 
ဆက်ပြီ post တွေများများေ၇းပါနော် ဘာလို့ လည်းဆိုတော့ ညီတို့ လို
နားမလည်သေးတဲ့ သူတွေအတွက် အစ်ကို post လေးတွေက လမ်းပြကြယ်လေးတွေလို
ဖြစ်နေလိုပါခင်ဗျာ အစ်ကို post တွေကိုအမြဲအားပေးနေတဲ့ ညီညီ
Anonymous November 18, 2011 at 10:48 PM
comment ရေးချင်နေတာ ကြာပြီ မရေးတတ်လို.။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ။
sss November 28, 2011 at 9:34 PM
ကျေးဇူတင်ပါတယ် အကို ရေ
Video Editing ကိုစိတ်ဝင်စားပြီး စမ်းကြည့်ချင်ပေမဲ့ အခွင့်မကြုံလိုစမ်းကြည့်ခွင့်မရခဲ့ဘူး
အခုတော့ ကိုနေမင်းကျေးဇူးကြောင့် စမ်းသတ်ခွင့်ရခဲ့ပြီ ကျေးဇူးအများကြီးကိုတင်ပါတယ်။
အကိုရေ Android Mobile English-Myanmar Dictionary ကို တင်ပေးပါလား။
အကို website ကို နေ့တိုင်း ကြည့်တယ်။
ကျတော်လို့ သိပ်နားမလည် သူတွေအတွက် အသေးစိပ် ပုံနှင့်တကွ နောင်လည်များများ ထပ်တင်ပေးပါဦးလို့ တောင်းဆိုပါရစေ...ကျေှးဇူးအများကြီးတင်တယ်ဗျို့။
စစ်နိုင် December 5, 2011 at 8:19 PM
အခုမှပဲ ကွန်မန့် ပေးပုံပေးနည်းသိတော့တယ် ညီရေ .........
LNFAW December 13, 2011 at 9:21 PM
သံစဉ် December 18, 2011 at 5:02 AM
Thanks for you so much, brother!
I download and use connectify and I share hostport but even my hand phone connected still cannot use.
Please share me to understand how to use it.
zaw December 22, 2011 at 10:19 AM
Could you upload for me spb mobile shell for Nokia 97.
ကျေးဇူးအရမ်းကိုတင်ပါတယ်ကိုနေမင်းမောင် comment မရေးတက်လို့
ko tint January 26, 2012 at 11:36 AM
နေမင်းမောင် January 26, 2012 at 1:26 PM
ဒီအောက်ကလင့်မှာ တင်ပေးထားပါတယ်အကို ...
thank you for everything,Ko Na Min Maung.
Please help me something.
I have to encounter the problem in my laptop. It is HP. When I turn on it, one dialog box come up. The problem is
Application Name: UNINSTALL.exe_ToolbarUnInstaller
Application Version: 9.0.0.22
Application Timestamp: 4ee51735
Fault Module Name: UNINSTALL.exe
Fault Module Version: 9.0.0.22
Fault Module Timestamp: 4ee51735
Exception Offset: 00088f97
Additional Information 1: 62cb
Additional Information 2: 62cb9020d67342bc9f5b2504b9210ae9
Additional Information 3: d30d
Additional Information 4: d30dadf3396801aebde93c3f2f12eba9
I like your site very much. You haveagreat heart to help.
ပြည့်စုံ February 3, 2012 at 10:41 PM
အရမ်းကို ကျေးဇူးတင်ပါဗျာ ကျွန်တော်ရေးချင်နေတာကြာလှပြီ။ ရေးတိုင်း အနီစာလုံးတွေပေါ်နေလို့
စိတ်ညစ်နေတာ အခုလိုရှင်းပြပေးတာ အရမ်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။
ayekomaung February 15, 2012 at 11:41 AM
ကိုနေမင်းမောင်ဆိုဒ်ကလေးကို ခုမှသိခွင့်ရတာ ကျွန်တော့်အတွက်အရမ်းကို စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်ဗျာ
ကျွန်တော်ဟိုနေ့က မှ သူငယ်ချင်းတစ်ရောက်သုံးနေရင်းနဲ့တွေ့ဖြစ်တာ အရမ်းကိုကောင်းတယ်ဗျာ
လွယ်လွယ်နဲ့အပြည့်အစုံကိုရှင်းပေးထားတယ်။ ကျွန်တော်တော့အဲလိုမျိုးတွေကို ပိုသဘောကျတယ်ဗျာ
တစ်ချို့ကြ ပို့စ်လေးတွေက လွယ်ပါတယ်ဆိုပြီး ဆော့ဝဲလေးတင်သွားတယ်။ အဲဒါဘာလုပ်ရမယ်မှန်းမသိဘူး
အကိုရ။ ကျွန်တောအကိုယ့် ဆိုဒ်ကလေးကိုရတဲ့နေ့ကစပြီး ကျွန်တော်သူငယ်ချင်းတွေ ပြန်ဖြန့်ဝေဖြစ်တယ်။
ူသူတို့က လဲခုမှပေးလို့တဲ့ရန်တောင်ထောင်လိုက်သေးတယ်ဗျာ။ ကဲ......ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့။ အကိုယ်ပို့စ်အသစ်တင်တိုင်း မေးထဲရောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲ အကိုယ်ပြောတဲ့အတိုင်းတော့လုပ်ကြည့်တယ်
ရောက်တော့မလာဘူးဗျာ ။ ကူညီပေးပါအုံးနော် ကွန့်မန့်ကတော်တော်ရှည်သွားပြီ။ခုလိုနည်းပညာတွေဖြန့်ဝေပေးတဲ့
Anonymous February 19, 2012 at 12:45 AM
ကိုမိုးရဲစပ်မိစပ်ရာများ February 19, 2012 at 4:32 PM
ဟားဟားမေမလိုဗျ ခုတောသိသွားပြီ ကျေးကျေးပါ
အကိုရေ gtalkမှာ face book ဗိုင်းရက် ကိုက်နေလိုပါ ကူညီပေးပါလို
than naing oo March 2, 2012 at 4:33 PM
ကျေးဇူးပဲ ကိုနေမင်း အခုလိုရှင်းပြတာ
I wish you to be happily every days and most sharing your knowledge for
thanks you ko nay
အကိုေ၇ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျွန်တော်အမြဲအားပေးနေပါတယ်
အကိုရေ ကူညီပါအုံးဗျာ ကျွန်တော် webcam camera ဆော့ဝဲလိုချင်လို့ပါဗျာ ကင်မရာနာမည်ကတော့ canyon CNR-WCAM420 ပါအကို အကိုအဆင်ပြေမယ်ဆိုကူညီပါအုံးအကို ကျွန်တော်ကွန်ပျုတာကိုဝင်းဒိုးတင်လိုက်တာ ၀က်ကန်ဖွင့်တာ သိပ်မမြင်ရလို့ပါ driver ခွေကလဲကွဲသွားလို့ပါအကို ကျေးဇူးပါအကို
ye tun March 25, 2012 at 2:37 PM
အကိုရေ ကူညီပါဦး ကျွန်တော့် gtalk ထဲမှာ တစ်ဖက်က ပို့ လိုက်တဲ့ maမနssage တွေမြန်မာလိုမပေါ်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ အဲဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
Moht April 10, 2012 at 5:54 PM
ဒီဆိုက်ကနေအမြဲဘဲ အကူအညီတွေ၊ အသိပညာတွေရနေတယ်။ တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
i don't download from up4vn.com
အရမ်းကိုအသေးစိတ် စေတနာထား ရေးပေးထားတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။
အစ်ကို့ Post တွေဖတ်ရတာ ပညာတွေအမျာကြီးရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊
ကျွန်တော် Gtalk မှာ ဖုန်းခေါ်လို့မရတော့လို့ အဲဒီအကြောင်းလေး ရှင်းပြပေးပါခင်ဗျာ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုနေမင်းမောင် ...
zero world May 25, 2012 at 2:35 AM
zero world May 25, 2012 at 2:36 AM
zero world May 25, 2012 at 2:38 AM
zero world May 25, 2012 at 2:44 AM
zero world May 25, 2012 at 2:51 AM
အကိုရေ အခုလို ပြောပြပေးတဲ့ အတွက် thank u
အစောကြီးတတည်းက comment ပေးချင်နေတာ မပေးတတ်လို့ မပေးခဲ့ရဘူး စာပေဖြန့်ဝေပေးတဲ့ ကိုနေမင်းမောင် ဒီထက်ကပညာတွေတိုးတက်ပါစေ ဘ၀ဆက်တိုင်းပညာပါရမီဖြည့်လိုက်တာပါဘဲ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
Philo June 6, 2012 at 10:50 PM
I would like to know how to install back Windows XP sp3 using USB Flash Drives /or\_ External Hard Drives...
Best regards.... From
One of your friends Philo.
ကဲ အခုတော့ ရေးရတာအဆင်ပြေသွားပြီ ကျေးဇူး အထူးတင်ပါတယ်ဗျာ ကျွန်တော် comment ပေးနေတာကြာပြီ မရလို့
၂၂.၆.၂၀၁၂ -၁၄း၃၃ ကိုနေမင်းမောင်ရေ့အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မှန်ပါတယ်အရင်တုန်းဝင်ဖတ်လေ့လာပြီးcommentမပေးဖြစ်ဘူး
အများကြီးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
min naing July 20, 2012 at 10:41 PM
တခါလေ ကျတော့ လည်းမဟုတ်တာတွေေ၇းသွားတော့ အခံရခက်သား
thanks ko ne min maung
ကိုနေမင်းမောင် ရေ ဆရာဦးအောင်လင်းရဲ့ အဂ`င်္လိပ်စာနဲံပတ်သက်တဲ့cd ကိုလိုချင်တယ် အပြင်မှာဝယ်ဘို့်လဲအဆင်မပြေလို့ပါ အဆင်ပြေရင်အဲဒါလေးတင်ပေးပါနော် တခြားcd တွေလဲလိုချင်တယ် ဘယ်မှာဒေါင်းရမလဲမသိနေဘူး ဒေါင်းရပြန်တော့လဲ ဘယ်ဟာကိုဒေါင်းရမှန်းမသိနေဘူး ကူညီပါအုံးနော်
Unknown September 1, 2012 at 8:03 PM
အကိုရေကျွန်တော် format factory 2.80 portable ဒေါင်းနေဒါ အဆင်မပြေလို့ ကူညီဘာအုံးနော်
Lu Soe September 12, 2012 at 12:02 PM
Lu Soe September 12, 2012 at 12:04 PM
အစ်ကို့ကျေးဇူးကို မမေ့ပါဘူး ။
yewinswe February 23, 2013 at 10:53 AM
အစ်ကိုရာကျွန်တော်က အစ်ကိုပဘလော့ကိုမကြာမကြာဝင်ကြည့်နေတဲ့သူပါ အခုအဆင်မပြေတာက အစ်ကိုတင်ထားတြ့ photo animation တွေကို ဒေါင်းလို့မရဖြစ်နေတယ် တစ်ခုမှအဆင်မပြေဘူး စိတ်ဝင်စားပါတယ်ဆိုမှဗျာ ပြန်တင်ပေးပါလား
Htet Naing April 3, 2013 at 5:21 PM
လေ့လာသူတွေ သဘောပေါက်အောင် စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ သည်းခံဖြေရှင်းပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ။
အကိုရေ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခုလိုတင်ပေးတဲ့ အတွက်ဒါပေမယ့်အဆင်မပြေတာက Patch ဖိုင်ကိုဘယ်ကနေရနိုင်မလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးပါဦး ကျွန်တော်ကအခုမှ အကို့ Blog ကို ရောက်ဖူးတာဆိုတော့ ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကို မသိလို့ပါ အချိန်လေးရရင်ပြောထားပါဦး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Kyaw Koko May 18, 2013 at 3:12 PM
ကိုနေမင်းမောင် အရာရာအဆင်ပြေပါစေ ............ စိတ်ဝင်စားတဲ့ Software လေးတွေ Download လုပ်သွားတယ်နော် ကျေးဇူးအထူးတင်လျက် ကိုကို ..........
peasant August 12, 2014 at 6:27 AM
Window 8.1 အကြောင်းသိချင်ပါတယ် ကျေးဇူးပြုပီးကူညီပါဗျာ
Angel Lay March 20, 2015 at 2:45 PM
မန်းလေးသာ;(ကိုစိုး) March 21, 2015 at 5:11 PM
ကျေးဇူးကမ္ဘာပါ ကိုနေမင်းမောင်ရေ နာမည်နဲ့လိုက်အောင် နေမင်းကြီးလိုထွန်းလင်းတောက်ပပါစေဗျာ
kk yy February 28, 2016 at 8:33 PM
အကို့ဆိုက်ကကိုအမြဲတမ်းမွှေနှောက်နေသူပါ ကျန်တော်တို့လိုချင်တာတွေလဲအကုန်ရတယ် သိချင်တာတွေလဲသိခဲ့ရတယ် ဒီလိုစေတနာနဲ့တင်ပေးတဲ့အတွက် အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် တင်ထားပေးတဲ့ Download Link တွေဆို Adf.ly ငါးစက္ကန့်စောင့်စရာမလိုပဲ တင်ပေးထားတော့ ဒေါင်းရတာအဆင်ပြေပါတယ် မြန်လဲမြန်တယ် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ကြောင်း kyawayekyaw